သမဝါယမနြ Standard , CB Standard S.S.M. INDUSTRY CO., LTD. - Brandex Directory
သမဝါယမနြ Standard , CB Standard
တဈဦးကဖုနျမှုနျ့အထောကျအထားကကျဘိနကျဝနျကွီးမြားအဖှဲ့ကအဆောကျအဦးအတှငျးကိုအသုံးပွုသညျ။ ဒါဟာစာရှကျသံမဏိ, 1 မီလီမီတာပတျလညျမှာအထူကနမေီတာ Ade ဖွဈပါတယျ။ကကျဘိနကျ၏အောကျဆုံးကကျဘိနကျမှထဲသို့ဝငျနိုငျငံခွားကိစ်စရပျမြားတားဆီးဘို့ဝါယာကွိုးမြားနှငျ့ပနျးကနျထားရနျတူးထားသောလိမျ့မညျ။ ဤသညျဝနျကွီးအဖှဲ့တပျဆငျရနျနှငျ့ဝါယာကွိုးရနျလှယျကူသညျ။ ဒါဟာ 20 မျောဒယျမြားရှေးခယျြဖို့ရရှိနိုငျပါသညျ။
အက်စ်အက်စ်အမ် စက်မှုလုပ်ငန်းလီမိတက်သည် စွမ်းအင်ြ ပန်လည်ထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို လမ်းစဉ်နှင့်အညီ ကျယ်ပြန့်လာစေမှုကို ကဏ္ဍတစ်ခုအနေဖြင့် အဓိကအရေးပေး ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကြိုး တ န်း သွ ယ် တန်ြး ခ င်းနည်ြး ဖ င့် လည်းေ ကာ င်း နေစွမ်းအင်သုံးဆဲလ်များ စုစည်းပေးထားခြင်းဖြင့်သော်လ ည်းကောင်း သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေရန် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဖြင့် နေစွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဆဲလ်များကို ထုတ်လုပ်ပေးနေပါသည်။ ယခု ထု တ် လု ပ် မှု တွ င် လည်းကျွ မ်း ကျ င် သူ အင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့နှင့် အထူးသီးသန့်အဖွဲ့တို့ကို ကွန်ပျူ တာဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။ စက် ရုံ ကို လည်းအရည် အေ သွး မှီ ကု န် ပစ္စ ည်း များ ထုတ်လုပ်နိုင်စေရန် ခေတ်မှီစက်သစ်ကြီးများဖြင့် လည်ပတ်ဆောင်ရက်ွလျက် ရှိပါသည်။ စက်ရုံကို ပိုမိုသိရှိစေရန်နှင့် ထုတ်ကုန်နမူနာများကို www.ssmindustry.com တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
CB Standard S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.